ဆန္ဒပြတဲ့လယ်သမားတွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ဆန္ဒပြတဲ့လယ်သမားတွေ
Posted by လင်းဝေ on Oct 27, 2011 in Myanma News, News | 15 comments
“အကြောက်တရားရှိပေမယ့် ငတ်တာတော့ မခံနိုင်ဘူး၊ လယ်လုပ်ခွင့်ပဲ ပြန်လိုချင်တယ်” လို့ပြောလာကြတဲ့လယ်သိမ်းခံလယ်သမားတွေ ဒီကနေ့ ဆန္ဒုပြနေကြတယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေထဲပါလာပါတယ်။
ဆက်မိရာလေးတွေ မေးကြည့်တော့ တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုန်နဲ့ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း စက်မှုဇုန် အတွက်လယ်တွေ အသိမ်းခံရတဲ့ လယ်သမားတွေလို့ ပြောကြပါတယ်။
ရဲက သိတဲ့သူတစ်ယောက်ကို ဆက်မေးကြည့်ရင်း ဘယ်သူတွေလုပ်တာလဲမေးတော့ ပြောပြတာကတော့ “ဟို ဖိုးဖြူတို့ အုပ်စုပါဗျာ၊ အလကား အလုပ်ရှုပ်အောင်လုပ်နေကြတဲ့ကောင်တွေ” တဲ့။
အင်း သူ့အဖြေမှာ သူ့အမြင်ပါနေတာကတော့ အမှန်အမှား လုပ်သင့်တာ မလုပ်သင့်တာထက် ဖိုးဖြူတို့ လုပ်နေတာတွေက သူတို့အတွက် အလုပ်ရှုပ် အာရုံနောက်စေတယ်။ မှန်တာမှားတာ လယ်သမားတွေ လယ်ဆုံးတာတွေ သူတို့တွက်ကြည့်ပုံမရဘူးထင်ပါတယ်။ သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ သူ့အလုပ်က အထက်က လူတွေ ဖြစ်စေချင်သလို အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်စေဖို့။ နည်းနည်းရှုပ်လာရင် သူပြဿနာအရှာခံရနိုင်တယ်။ သတင်း ဘာလို့ ကြိုမသိသလဲ အဟောက်ခံရနိုင်တယ်၊ ကြိုမတားနိုင်ကောင်းလားလို့ အထောင်းခံရနိုင်တယ်။ ဒီလိုပဲတွေးမိပုံရပါတယ်။ အင်းလေ သူတို့လည်း ပုံစံခွက်တွေထဲ နေလာရတာ ကြာပြီ ဆိုတော့။ နောက်တစ်ခါ သူတို့ ဘဝကလည်း ကိုယ့်ဘဝ သာယာဖြောင့်ဖြူးရေးအတွက် အထက် အရာရှိ( အရာမရှိတဲ့သူက အရာရှိကိုကြောက်၊ အရာသေးသေးရှိတဲ့သူက အရာကြီးရှိတဲ့သူကိုကြောက်၊ အရာရှိကြီးတွေက အရာ့အရာကြီးကြီး ဝန်ထုပ်ကြီးကြီး ရှိတဲ့သူတွေကို ကြောက်ရနဲ့ ဆိုတော့လည်း ဖြစ်သင့်၊ဖြစ်ထိုက်တာထက် ကိုယ့်အလုပ်မှာ ခေါင်းအေးအေးလုပ်ရဖို့၊ ဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ် ကင်းဖို့ လောက်သာ ပုထုဇဉ်ပီပီ ရှေ့တန်းတင်မိကြတာပေါ့လေ။) ။ တကယ်တော့ သူတို့ ရဲတွေနဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ အလုပ်ရှုပ်အောင် ဒီလို ပြဿနာဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့ အိုးအိမ်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ပေါင်းစား၊မွေးစား သူများကို အပြစ်တင်သင့်၊ အရေးယူသင့်တာပါ။
အခုဟာကတော့ လယ်အသိမ်းခံရတဲ့ လယ်သမားတွေ အသံနည်းနည်းထွက်ခွင့်ရလာလို့ မဟုတ်တာလုပ်ထားတာတွေ ပေါ်လာနေတဲ့ အချိန်ဖြစ်နေပါတယ်။
စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံတိုင်းပြည်၊ ဆင်းရဲသားများအတွက် ဦးစားပေးကြည့်မယ့် အစိုးရရဲ့ မူဝါဒ အရဆိုရင်တော့ ဒီကိစ္စတွေကို ဖိဖိစီးစီး ကိုင်တွယ်သင့်ပါတယ်။
ဥပမာ… အရင် လုပ်လို့ကိုင်လို့ချောင်တုန်းက အိုးအိမ်နဲ့ ပေါင်းပြီး လယ်တွေကို အိုးအိမ်အသိမ်းပြလို့ အကွက်ရိုက်ရောင်းစားတဲ့ ဇေကမ္ဘာကိုလည်း မင်္ဂလာဒုံဘက်မှာ အသံတွေထွက်လာပါပြီ။
လယ်သမားတွေဆီက ဆန္ဒသဘောထား ပါသည်ဖြစ်စေ မပါသည်ဖြစ်စေ လယ်တစ်ဧကကို သုံးသိန်းလောက်နဲ့သိမ်းပြီး ကွန်ကရစ်လမ်း အဖေါက်ပြလို့ စက်မှုဇုံထောင်တယ်ဆိုပြီး တစ်ဧကကို သိန်း၆၅၀နဲ့ ဇေကမ္ဘာက ပြန်ရောင်းစားတာပါ။ ဝယ်တဲ့သူတွေများလွန်းလို့ တစ်ဧက သိန်း၉၀၀ အထိ တက်ရောင်းနေတုန်း အခုလို ကိစ္စတွေပေါ်လာလို့ အရောင်းရပ်ထားပါတယ်တဲ့။
ဝယ်တဲ့သူတွေကလည်း ဝယ်လိုက်တာမှ စူပါကော်ဖီမစ်၊လေဆာသွားတိုက်ဆေး၊နောင်ရှည်ဆန်၊ဝမ်းတီး စတာတွေထုတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကတောင် ဧက၁၀၀လောက်ဝယ်ထားလိုက်ပါသေးသတဲ့။
ကဲ ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလည်း။ ကိုယ်က ချမ်းသာဖို့ကို သူများဘဝကို ဖျက်ရက်သလိုဖြစ်မနေဘူးလား။ လယ်သမားဆိုတာ လယ်မြေ က သူတို့ဘဝပါ။ သူတို့မြေကြီးက သူတို့ဘဝပါပဲ။
သူတို့ ရပ်တည်ဖို့ စားသောက်နေထိုင် အသက်ရှင်ဖို့အတွက် သူတို့ဘဝမှာ ရှိတာက မြေကြီးပါပဲ။ အဲဒါကို ဦးဏှောက်ပြေးပေမယ့် စိတ်ထားရက်စက်နိုင်သူတို့က ကိုယ်ဇိမ်ခံဖို့ အချမ်းသာကြီးချမ်းသာဖို့အတွက် အဲဒီ ကျောမွဲတွေရဲ့ ဘဝပေါင်းများစွာကို နင်းချေရက်ကြပါပေရဲ့။(အိမ်ထောင်စုပေါင်းများစွာရဲ့ လယ်မြေဧကများစွာ ကို ၃သိန်းနဲ့ သိမ်းပြီး သိန်း၆၅၀လောက်နဲ့ ပြန်ရောင်းတာ တစ်ဧက သိန်း၆၀၀လောက်တော့ အနည်းလေးမြတ်မှာပဲလေ။)
ကဲ အောက်မှာ ဧရာဝတီက သတင်းလေးကို သတင်းအပြည့်အစုံဖတ်ချင်သူများ ဖတ်နိုင်ဖို့ မျှပေးလိုက်ပါတယ်။
“အကြောက်တရားရှိပေမယ့် ငတ်တာတော့ မခံနိုင်ဘူး၊ လယ်လုပ်ခွင့်ပဲ ပြန်လိုချင်တယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ဖတ်ကြည့်ကြပါ။ ဧက ၂၀,၀၀၀ ကျော်ဆိုတော့ မနည်းမနောပါလားဗျို့။
ဖိလွန်းတော့လည်း ခံနိုင်သလောက်တော့ ခံကြမှာပေ့ါ
အာဏာရှိတယ်ဆိုပြီး လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်ခဲ့ကြတာ မနိပ်ဘူးဗျာ
မောင်းထုတ်လို့ ဆန္ဒပြပွဲ ပျက်သွားပေမဲ့….တန်ရာတန်ကြေး မလျော်ပေးသေးသမျှ ထပ်ဖြစ်လာဦးမှာပဲ..
တစ်ခုခုဆို..သိမ်းဖို့ ပဲ သိတဲ့လူတွေ…
အားနာလို့ …မောင်ပုလို ပေါ်တင် မဆဲချင်ဘူး..
သဗ္ဗသတ္တာ ဘဝန္တု သုခိတတ္ထာ
အလုံးစုံသော သဗ္ဗေသတ္တာတို့သည် ကျမ္မာကြစေကုန်သတည်း
အပေါ်က ကိုတရုတ်မပါ :D :D :D
မေတ္တာပို့ တာတောင် ကွက်ခြုံ ပို့ သွားတာပဲ
လူသာ ပုတာ နာမည်တော်တော်ရှည်တဲ့ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု
ချဟေ့ ချကြဟေ့။ ကိုယ်ကျိုးအတွက်ကြည့်ကြတဲ့ အာဏာရှင်တွေကို ချဟေ့။
မဟုတ်တာ လုပ်သူတွေ တစ်နေ့ ဝဋ်လည်ကြမှာပါ။
လောလောဆည်တော့ နစ်နာသူတွေကို စာနာမိပါတယ်။
“အကြောက်တရားရှိပေမယ့် ငတ်တာတော့ မခံနိုင်ဘူး၊ လယ်လုပ်ခွင့်ပဲ ပြန်လိုချင်တယ်”
ရင်ထဲက ထွက်လာတဲ့အသံမို့လား မသိဘူး ဖတ်ရတဲ့လူတောင် တော်တော်ဖီလင်တက်သွားတယ်။
လက်ရိုက်ချိုးတာနဲ့ အတူတူပဲဗျ သူတို့ ဘာမှလုပ်စားတတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး
မြန်မာပြည်ကတော့ ရောင်းလို့ရတာ အကုန်ရောင်းတဲ့အပြင်
“ဖိုးဖြူ ”အကြောင်းတော့ ကျုပ် သိသမျှ အဲလိုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်အောင် လိုက်ဖွတတ်တာ
ဒီကောင့်အကျင့်ဗျ ဒါပေမယ့်တစ်ကယ် ပြဿနာစပြီးဆိုရင်တော့ ဒီကောင်လစ်သွားရော
“အကြောက်တရားရှိပေမယ့် ငတ်တာတော့ မခံနိုင်ဘူး၊ လယ်လုပ်ခွင့်ပဲ ပြန်လိုချင်တယ်” ဆိုတာလေး ကို ဖတ်ရတော့ ကိုယ်ချင်းစာမိတယ်ဗျာ ။ ပိုက်ဆံ ၃ သိန်းဆိုတာ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ ဘယ်လောက်မှ တန်ဖိုး မရှိဘူးရယ် ။
တိုင်းပြည်ကို အူမတောင့်အောင် လုပ်ရမဲ့ အစား သီလပျက်အောင်လုပ်ရက်တယ်…
ဘယ်သူသေသေ ငတေ မာရင် ပြီးရော ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ လူတွေ လက်ထဲ လုပ်ပိုင်ခွင့် တွေ ရတဲ့ အခါ …
ဒီထက်မက ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းတဲ့ အဖြစ်တွေ လည်း ရှိနေအုန်းမှာပဲ ….
ပါးစပ်တွေကို ပိတ်ထားရလို့ သာ…. ဖွင့်ခွင့်သာရမယ်ဆိုရင်တော့………
ဆိုတဲ့ စကားလေးအတိုင်း လယ်သမားတွေ ခုဒုက္ခကို ဖြေရှင်းပေးသင့် ပါတယ်
ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေး ဆိုပြီး ဆန္ဒပြတဲ့ လူတွေနောက် မလှမ်းမကမ်းက လုံထိန်းကား
၅ စီး လိုက်နေတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုသဘောလဲ မသိဘူး …….
၂၀၀၃-၂၀၀၄ ခုနှစ်က မကွေးတိုင်း၊ ယောဒေသ၊ ကျောက်ထုမှာ လေယာဉ်ကွင်းအသစ်ဖောက်ဖို့ဆိုပြီး လယ်မြေတွေအသိမ်းခံရပါတယ်..။ ပုံတောင်ပုံညာနဲ့ ချင်းတောင်ကြားမှာရှိတဲ့ ယောဒေသမှာ ပုဂံခေတ်လောက်ကတည်းက တူးမြောင်းကြီးဖောက်ပြီး ယောသူယောသားများ အေးချမ်းစွာလုပ်ကိုင်လာတဲ့ လယ်ယာမြေကောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်…။ ယောဒေသရဲ့ အသက်သွေးကြောလယ်ယာမြေတွေကို လေယာဉ်ကွင်းဖောက်ဖို့ သိမ်းခဲ့လို့ စီးပွားရေးကြပ်တည်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းခက်ခဲပြီး လူငယ်လူရွယ်တွေ ရွာတွေကစွန့်ခွာခဲ့ကြရပါတယ်..။ ကျောက်ထုမှာ လေယာဉ်ကွင်းအဟောင်းရှိပေမယ့် မသုံးတာကြာခဲ့ပါပြီ…။ ၂၀၀၄ခုနှစ်မှာ လေယာဉ်ကွင်းသစ်ကို ခမ်းနားစွာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး လပိုင်းလောက် လေယာဉ်ပြေးစွဲခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ လုံးဝပြေးစွဲခြင်းမပြုတော့ပါဘူး…။ ဒေသခံတွေ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲပြီး အကျိုးမရှိပေမယ့် ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ Asia World ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်းမှာ သစ်တောတွေခုတ်ယူခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်..။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ တိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်ထားရှိတဲ့ စေတနာမှန်တွေပါဘဲ..။
ဒီပို့စ်ဟာကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီအစိုးရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ပီပြင်မှုရှိ မရှိကို သရုပ်ပြတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ဟာ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရလို့ အမည်ခံပြီး ဒီမိုကရေစီ လမ်းစဉ်နဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ဒီကနေ့ ဒီမိုကရေစီ အမည်ခံအစိုးရဟာ ကျကျနန လုပ်ဆောင်နေတာတွေ တွေ့နေ မြင်နေ ကြားနေရပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ အမည်ခံ အစိုးရမဟုတ်ဘူးဆိုရင် လူသားအခွင့်အရေးတွေကို ကျကျနန လုပ်ဆောင်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့လိုလာပါပြီဆိုတာကို ဒီကနေ့ နိုင်ငံရဲ့ အကြီးအကဲ သမ္မတကြီးသိအောင် ကြားအောင် မြင်အောင် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေဟာ ဖော်ဆောင်ပေးကြဖို့လိုလာ ပါပြီ။ဒီလိုမှ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို ပြည်သူတွေရတယ် မရဘူးသိရအောင် မီဒီယာတွေက တဆင့် သိအောင် မြင်အောင် ကြားအောင် ပြောနေရေးနေတာတွေကို ဒီမိုကရေစီနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နေတဲ့ တိုင်းပြည်အကြီးအကဲတွေ သိအောင်မလုပ်ဖူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေးကဏ္ဍတွေမှာ ဘယ်တော့မှ ပါဝင်ခွင့် ရတော့မည်မဟုတ်ပေ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခွင့်အရေးကိုမှ မတောင်းတတ်ရင် ဘယ်တော့မှ ဒီတိုင်းပြည်ဟာ ဒီမိုကရေစီ တိုင်းပြည်ဖြစ်ပေါ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် တိုင်းပြည်ဟာ ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်အတ်ိုင်းသွားမယ်ဆိုရင် အကြီးအကဲတွေချည်းပဲ ဒီမိုကရေကို ဖော်ဆောင်လို့မရဘူး ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေ နဲ့ အကြီးအကဲတွေသိဖို့ အလွန်လိုအပ်လှပါတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေးကာလမှာ တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြည်သူပြည်သားအားလုံးဟာ လူ့အခွင့်အရေး အမြင်တွေကို အသိရှိရှိနဲ့ ဖော်ဆောင်တိုက်တွန်း အကောင်အထည်ဖေါ်ရမည့် ကာလကို ရောက်နေပြီ ဆိုတာကို မြင်ဖို့လိုလာပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အာဏာရှင်စစ်အစိုးရရဲ့ အောက်မှာ နေလာတုန်းကလည်း ဒီမိုကရေဖော်ဆောင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလာခဲ့ကြရပြီ။ အခုလည်း ဒီမိုကရေစီအစိုးရလို့ခေါ်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်နေပါပြီ။ ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာလည်း ဒီမိုကရေစီ အစိုးရစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ကျကျနနတောင်းဆိုဖို့ လိုလာနေပြီဖြစ်ပါကြောင်း။